FJKM Imerinkiasinina : Nitsondrano an-dRavalomanana mivady -
AccueilRaharaham-pirenenaFJKM Imerinkiasinina : Nitsondrano an-dRavalomanana mivady
03/12/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nihazo an’Imerinkiasinina ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, sy ny vady aman-janany omaly. Tamin’izany indrindra no nanatrehan’izy ireo ny fotoam-pivavahana tao amin’ny FJKM Imerinkiasinina.
Araka izany, ankoatra ny fotoam-pivavahana notarihin’ny ray aman-dreny mpitandrina, ny pastora Trimozafy Salomon, nitsondrano azy mivady ny fiangonana tany an-toerana. Tamin’izany indrindra no nanambaran’ny mpitandrina fa mitso-drano ny kandidà laharana faha-25 mivady ny fiangonana FJKM Imerinkiasinina manoloana ny tolona izay hatrehan’izy ireo eo amin’ny raharaham-pirenena, indrindra amin’ny maha kandidà Filoham-pirenena hiatrika ny fihodinana faharoa an’i Marc Ravalomanana. Tamin’izany ihany koa no niredonan’ny fiangonana ny hira Mivavaka ho anao, ho fampaherezana ny kandidà laharana faha-25.
« Tonga eto izahay nandray ny tso-drano. Nandray ihany koa ny fampanantenana. Mifalia ao amin’ny Tompo, mifalia amin’ny fanantenana. Tena faly aho, faly aho satria nandray ny tso-drano. Tsy sanatria akory manamaivana ny an’ny hafa, sanitaria akory hoe ny an’ny sasany tsy mitovy amin’izao fa tena mampihetsi-po. Nivaly tokoa iny ny valim-pifidianana fihodinana voalohany amin’ny fifidianana Filoham-pirenena ary tafita hiatrika ny “2è Tour”, ny 19 desambra izao. Tena manantena isika amin’ny fifaliana, tena manantena isika fa hibata ny fandresena fa minoa fotsiny ihany…”, hoy i Marc Ravalomanana tamin’ny fandraisany fitenana.
Nohamafisin’ny kandidà laharana faha-25 ihany koa fa na iza na iza fahavalo, na manao ahoana ny endriky ny sakantsakana, mila ilay fahasahiana hatrany isika. “Ireto izahay mivady tena vonona tanteraka ary manana fanantenana amin’ny fifaliana. Isaorana an’Andriamanitra lehibe nomeny fahasahiana. Koa na inona na inona fanantenana nefa tsy sahy, fa izay mampitahotra rehetra izao dia hampiferotraina. Efa nomen’Andriamanitra izany fahasahiana izany isika ka handositra ireo fahavalo. Mijoro eto izahay, maneho fisaorana mitafotafo ny fiangonana”, hoy izy teny am-pamaranana.
Nankalaza ny faharoa taona nijoroany ny teo anivon’ny Vondrona RLM Communication ahitana ny gazety Triatra, La Ligne de Mire, La Depêche de Madagascar, Le Citoyen, Akon’i Madagasikara, ny AZ Radio, ny On Air Radio sy ...Tohiny